Space Sweepers (2021) | MM Movie Store
ကမ်ဘာကွီးဟာ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ အမှိုကျသရိုကျတှေ နထေိုငျဖို့မသငျ့လောကျတဲ့အထိဆိုးရှားတဲ့အခွအေနမြေိုးဖွဈလာတယျ….ဒီအခွအေနကေိုကြျောလှားဖို့ သိပ်ပံပညာရှငျတဈယောကျဟာ UTSလို့ချေါတဲ့အာကာသဇုနျတဈခုဖနျတီးပွီး သီခွားကမ်ဘာတဈခုတညျဆောကျပွီးတော့ နထေိုငျကွတယျ….
အဲ့ဒီနရောမှာ ထယျဟိုခေါငျးဆောငျတဲ့အဖှဲ့ငယျလေးတဈဖှဲ့ရှိတယျ..သူတို့ကတော့ စှနျ့ပဈပစ်စညျးတှအောကာသထဲမှာလိုကျကောကျပွီး ဈေးကောငျးကောငျးနဲ့ ပွနျရောငျးလရှေိ့တဲ့အဖှဲ့ပေါ့…..ဆနျတို့ သဘာဝအသီးအနှံတို့ဆိုတာ သိပျကိုဈေးကောငျးရတဲ့ပစ်စညျးတှေ…တဈရကျစှနျ့ပစ်စညျးတှလေိုကျရှာနတေုနျး မမြှျောလငျ့ဘဲ ကလေးလေးတဈယောကျကိုတှတေ့ယျ…
ပုံမှနျဆို UTSက ရဲတှကေိုအပျလိုကျသငျ့ပမေဲ့ ထယျဟိုတို့အဖှဲ့ဟာ ဒီကလေးမလေးကိုသံယျောဇဉျတှယျမိတာနဲ့တိတျတဆိတျထိနျးသိမျးထားမိတယျ…အဲ့ဒီလို သူတို့နဲ့အတူချေါထားလိုကျခွငျးကပဲ ပွဿနာမြိုးစုံကိုလကျယတျချေါလိုကျသလိုဖွဈသှားတော့တာပါပဲ….
ဒီကလေးမလေးဟာ ဘယျကွောငျ့အန်တရယျမြားတာလဲ…သူ့ကို ဘယျလိုရနျသူတှကေမြားလိုခငျြနတောလဲ…ထယျဟိုတို့အဖှဲ့ကရော ကလေးမလေးကိုကယျနိုငျပါ့မလား…သူတို့အသကျအန်တရယျတှကေိုရော ကာကှယျနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ခံစားကွညျ့လိုကျပါဉီး….ဆောငျဂြှနျကီရဲ့ကားသဈဖွဈပွီး သိပ်ပံအကျရှငျကားဖွဈပါတယျ…
ကမ္ဘာကြီးဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အမှိုက်သရိုက်တွေ နေထိုင်ဖို့မသင့်လောက်တဲ့အထိဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်….ဒီအခြေအနေကိုကျော်လွှားဖို့ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ UTSလို့ခေါ်တဲ့အာကာသဇုန်တစ်ခုဖန်တီးပြီး သီခြားကမ္ဘာတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ နေထိုင်ကြတယ်….
အဲ့ဒီနေရာမှာ ထယ်ဟိုခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်..သူတို့ကတော့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေအာကာသထဲမှာလိုက်ကောက်ပြီး ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ ပြန်ရောင်းလေ့ရှိတဲ့အဖွဲ့ပေါ့…..ဆန်တို့ သဘာဝအသီးအနှံတို့ဆိုတာ သိပ်ကိုဈေးကောင်းရတဲ့ပစ္စည်းတွေ…တစ်ရက်စွန့်ပစ္စည်းတွေလိုက်ရှာနေတုန်း မမျှော်လင့်ဘဲ ကလေးလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်…
ပုံမှန်ဆို UTSက ရဲတွေကိုအပ်လိုက်သင့်ပေမဲ့ ထယ်ဟိုတို့အဖွဲ့ဟာ ဒီကလေးမလေးကိုသံယော်ဇဉ်တွယ်မိတာနဲ့တိတ်တဆိတ်ထိန်းသိမ်းထားမိတယ်…အဲ့ဒီလို သူတို့နဲ့အတူခေါ်ထားလိုက်ခြင်းကပဲ ပြဿနာမျိုးစုံကိုလက်ယတ်ခေါ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ….
ဒီကလေးမလေးဟာ ဘယ်ကြောင့်အန္တရယ်များတာလဲ…သူ့ကို ဘယ်လိုရန်သူတွေကများလိုချင်နေတာလဲ…ထယ်ဟိုတို့အဖွဲ့ကရော ကလေးမလေးကိုကယ်နိုင်ပါ့မလား…သူတို့အသက်အန္တရယ်တွေကိုရော ကာကွယ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ခံစားကြည့်လိုက်ပါဉီး….ဆောင်ဂျွန်ကီရဲ့ကားသစ်ဖြစ်ပြီး သိပ္ပံအက်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်…